I-Oogur: Yakha kunye nokuKhangela ii-URL zakho zePhulo likaGoogle loPhononongo | Martech Zone
I-Oogur: Yakha kunye nokuKhangela ii-URL zakho zePhulo likaGoogle lokuHlaziya
NgoLwesihlanu, Februwari 2, 2018 NgoLwesihlanu, Februwari 2, 2018 Douglas Karr
Abathengisi benza amaphulo ngokusebenzisa uninzi lwezitishi kwaye phantse wonke umntu usebenzisa iGoogle Analytics kule mihla. Ngelixa enye isoftware njengababoneleli beenkonzo ifaka umkhondo we-URL yokulandela umkhondo, uninzi lwazo lusalushiya kumthengisi ukuze luzalise amakhonkco abo Iiparamitha ze-UTM zikaGoogle.
Ukwakha amakhonkco akho omkhankaso kubalulekile, ngakumbi ngoku ekubeni uGoogle enganiki lwazi lubalulekileyo kubasebenzisi bakaGoogle abangene kuzo naziphi na iipropathi zabo. Oku kwaziwa njenge itrafikhi emnyama kuba awunakuxela ukuba undwendwe lufike phi okanye njani. Ukuthintela oku, kuya kufuneka ufake iiparameter ze-UTM kwaye wakhe ii-URL zePhulo likaGoogle. Ukuba uqhuba iphulo kwi-imeyile, kuFacebook, kuTwitter, ukubiza isenzo, iintengiso, kunye nezinye iindlela ... kufuneka yakha nganye ye-URL yakho yephulo kwimeko nganye. Kuyakhathaza kwaye kudla ixesha. Kude kube ngoku…
I-Oogur yakha zonke ii-URLs zoMkhankaso kaGoogle kwindawo enye, enobuntu. NgeOogur, unga:
Yakha -Sebenzisa i-oogur URL builder ukwakha ii-URL ezimakwe ziiparitha ze-UTM ezifanayo.
umkhondo -Khangela yonke iparameter ye-UTM kunye nee-URL ezakhelwe endaweni enye- hayi ispredishithi.
ingxelo -Fumana ukuqonda ngakumbi kwidatha yomkhankaso kuGoogle Analytics ngokunciphisa inani lezithuthi ezimnyama kwiingxelo.
I-Oogur ithatha le ncwadana yemigaqo-nkqubo, eyinkqubo yokwakha amakhonkco alandekayo kwaye iyenze ibe lula kakhulu. Njengomthengisi wentengiso yedijithali, i-oogur indivumela ukuba ndigcine ixesha lokwakha ii-URLs zephulo kwisikali, esikhulu. Isiphumo kukuhamba komsebenzi okucwangcisiweyo kunye nokusebenza okwenza ukuba kube lula ukubona ukuba loluphi uhlobo lomxholo oluqhuba kakuhle. Ndingacebisa kakhulu ukunika i-oogur ”UDerek McClain, uMphathi weNtengiso yeDijithali Isisombululo somqhubi
Uyisebenzisa kanjani i-Oogur ukwakha ii-URLs ezininzi eziPhawulwe ngeParameter ye-UTM
Izibonelelo zeOogur zibandakanya:
Gcina ixesha elininzi ngokwakha kunye nokulawula ii-URL kunye nee-tag ze-UTM kwiqonga elinye kunabakhi bangaphandle, amaspredishithi kunye nezifinyezi ze-URL
Yakha ii-URLs ezininzi ngexesha elinye
Phinda usebenzise iithegi ze-UTM obusoloko uzisebenzisa ukwenza ingxelo engaguquguqukiyo kuGoogle Analytics
Isicelo sewebhu se-Oogur sihamba ngokulula, ngokungafaniyo neespredishithi
Iingxelo zikaMkhankaso kaGoogle woHlahlelo ziqala ukukunika ulwazi olongezelelekileyo, oluluncedo xa usebenzisa iithegi ze-UTM ukuchonga iphulo elithile kwii-URLs zakho- kunciphisa inani "lezithuthi ezimnyama"
I-Oogur yakhiwa ngabathengisi kubathengisi-ngokuqhubekekayo ukuphucula ukubonelela iimfuno zabathengisi
Kwaye, ngokuxhasa i-oogur, uxhasa ishishini lobuchwephesha elinabasetyhini. I-Oogur isekwe nguNicki Laycoax, umhlobo wam okwexesha elide.
Ngabantu abaninzi kwiqela lethu besebenzisa i-parameter generator, emva koko isinqumli kwaye abanye basebenzisa ii-plugins zabo ze-Chrome kuye kwaba nzima ukulandela yonke imisebenzi yethu yokwakha ikhonkco. Emva koko yongeza kwispredishithi ukubanika ikhathalogu bonke, nokuba ngaphakathi kwendibaniselwano efana neOfisi365 okanye uGoogle amaxwebhu, kwaye le nkqubo ayifanelekanga. Ukusebenza kwiqonga elinye kuyo yonke le misebenzi kube yinzuzo enkulu. UChris Theisen, uManejala weNtengiso, Idijithali yeBlueSky
usebenzisa I-Oogur, ingxelo yakho yeGoogle Analytics iyahambelana kwaye igcwele ngokupheleleyo kwiziphumo eziphuculweyo:
Bhalisa phambi kukaFebruwari 28, 2018, landela @oogurit kunye ne-tweet "UMHLOBO-WE-DKNEWMEDIA", kwaye uyakufumana i-10% kubomi bokurhuma kwakho!
Bhalisela uvavanyo oluSimahla!
Ukubhengezwa: UDerek noChris banikwe ukufikelela simahla kwi-oogur.com njengenxalenye yeqela lomsebenzisi we-beta. Aba basebenzisi babini bancede kuvavanyo lwesicelo kunye nokubonelela ngengxelo ebalulekileyo ukunceda iqela ngezimvo zokuphucula ukongeza kwi-oogur ukwenza iqonga libe lelilungileyo kubathengisi. UDerek noChris zange bahlawuliswe iphepha-mvume labo ngokutshintshela ingxelo yabo ethembekileyo ukuba babelane ngayo nabathengi abanjengawe.
tags: umakhi wephuloitrafikhi emnyamai-google analyticsUmkhankaso kaGoogle womakhi we-urlooguriiparameter ze-utm
IPacketZoom's Mobile Expresslane CDN Isebenzisana neAmazon Cloudfront
Nicki Ntloko (@NtombiNgcayi)
Enkosi ngokwabelana, Doug!